I-V-Nova ithola utshalomali olubalulekile kusuka kubahlanganyeli beNovator - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni We-NAB Show - NAB Show LIVE
Ikhaya » Izindaba » U-V-Nova uthola ukutshalwa kwezimali okuphawulekayo kusuka ku-Novator Partners
U-V-Nova uthola ukutshalwa kwezimali okuphawulekayo kusuka ku-Novator Partners
• USihlalo we-Novator uTor Björgólfsson ujoyina ibhodi labaqondisi be-V-Nova.
Iphothifoliyo kaNovator ifaka opharetha abakhulu abahamba phambili abahlanganisa i-Play (Poland), WOM (eChile) kanye neNova (i-Iceland).
• Ukutshalwa kwezimali kuyaqinisa futhi kwandise ukuba khona kwezimakethe kwezixazululo zokucindezela kwePESEUS.
Kubanjwe ngasese I-V-Nova limited, umhlinzeki oholayo wezixazululo zokunciphiswa kwevidiyo, namuhla umemezele ukuthi ivikele imali engamakhilogremu ayisigidi ukuqhuba ukukhula okuthe xaxa kwebhizinisi lonke. Inkampani ehola izinto ezintsha izothuthukisa amaqembu ayo ocwaningo nawokuthuthuka ukuze iqinise ikhodi yayo yevidiyo ye-PERSEUS ukuze isebenze kuyo yonke imikhakha yezimboni eziningi futhi yandise imisebenzi yayo yezentengiso yaphesheya ukuze isheshise ukungena kwayo emakethe.
Usomabhizinisi odumile wase-Iceland u-Thor Björgólfsson, onguSihlalo wefemu yokutshala imali u-Novator, uhola le mali futhi uzojoyina ibhodi le-V-Nova. IBjörgólfsson iletha inotho yokuhlangenwe nakho emikhakheni efanelekile ku-V-Nova kufaka phakathi imali ayitshalile kanye nokuzibandakanya kwakhe ekusebenzeni okukhulu okuhlukahlukene okubandakanya i-Play (iPoland), i-WOM (eChile) neNovava (i-Iceland).
"Izinsizakalo zevidiyo emhlabeni jikelele zilwela ukuletha ukusakazwa kwamavidiyo asezingeni eliphakeme nangaphezulu ukuze akwazi ukuncintisana emakethe egcwele abantu," kuphawula uTor Björgólfsson. “Ngihlabe umxhwele kakhulu i-PERSEUS engaba nayo ukubhekana nezidingo zangempela zabasebenza. Kuyangithokozisa ukuthi manje sisebenza noGuido neqembu lakhe elinekhono. ”
"Lokhu kutshalwa kwezimali okukhulu kusho ukuthi singasheshisa futhi sinwebe imizamo yethu yokuthuthukisa kanye nemizamo yokuthengisa," kusho uGuido Meardi, oyi-CEO kanye nomsunguli we-V-Nova. "Ukuba noThor nethimba leNatator kubandakanyekile nakho kuwumjovo omkhulu wobungcweti kanye nesipiliyoni seV-Nova futhi silindele ukusebenzisana ezinyangeni ezizayo."
IV-Nova isivele ibala phakathi kwabatshalizimali bayo, abaholi bezimboni zomhlaba wonke njenge I-Eutelsat ne-Sky Group. I-V-Nova yathola futhi iphothifoliyo ephelele yomhlaba wonke yobunikazi bokucabanga kwamavidiyo uFaroudja Enterprise Inc. ngoJanuwari 2017.
Ukucindezelwa Izixazululo Inkulisa Sihlalo we-Novator Ukutshalwa Kwezimali kweNovator PERSEUS Thor Björgólfsson V-Nova Ukutshalwa kwemali kweV-Nova Ukusakaza kwevidiyo	2018-10-18
Ngaphambilini: I-KHQ-TV I-Supercharges Video ye-Digital ene-FUEL, i-Bitcentral's Linear ku-Demand Streaming Solution
Olandelayo: Umkhiqizo womkhiqizo